Njirimara na mkpa karst enyemaka | Netwọk Mgbasa Ozi
Na geology enwere ụdị enyemaka dị iche iche. Enyemaka ndị metụtara ihe mejupụtara ya, nhazi ya ma ọ bụ ogo ya. N'okwu a, anyị ga-ekwu maka ya karst enyemaka. Ọ bụ ụdị ọdịdị ala nke ejiri nkume limestone mejupụta. Limestone bụ ụdị pụrụ iche pụrụ iche n’ihi na ọ bụ ezie na ọ bụ nkume na-edozi ahụ na mbido ya, mmiri na ihe ndị dị ndụ na-enye ya mmekorita nke na-eme ka ọ ghara iguzogide ndị ọrụ ikuku dị iche iche na-ebuso ndị na-agha ije agha.
N’isiokwu a anyị ga-akọwa njirimara niile na mkpa mkpa enyemaka karst.
0.1 Isi atụmatụ
1 Reliefdị enyemaka nke karst
1.0.1 Enyemaka enyemaka nke mpụga
1.0.2 Esịtidem karst enyemaka
Nkume nzu nzu adighi ekewa kama o na-agbaze na mmiri. Ya mere, ọ na-eguzogide ọtụtụ ndị mbuze mmiri ma e wezụga mmiri ozuzo. Ka oge na-aga, ọ na-agwụ ike ma mepụta ihe ngwọta, nke bụ ihe mejupụtara enyemaka karst. Typedị enyemaka a na-eto ọ bụghị naanị na okwute limestone kamakwa Uvsls
Iji mụtakwuo banyere enyemaka kachasị, anyị ga-abanye ntakịrị n'ime nkume nke mejupụtara ya. A na-enwe limestone nke kachasị calcium carbonate. Nke a bụ ihe na-eme ka ntutu gbazee na mmiri, ọ bụ naanị ihe mere nkume. O nwekwara adịghị ọcha ma a na-akpọ nchịkọta ha terra rossa. Site na mgbasa nke okwute limestone anyị nwere ike ịchọta ụdị enyemaka abụọ karst: n'ime na mpụga.
Reliefdị enyemaka nke karst
Enyemaka enyemaka nke mpụga
Simpledị kachasị mfe nke na-agbaze okwute limestone bụ lapiaz. Ndị a bụ oghere elu elu nke nwere ike ịmalite site na obere oghere milimita na mita ole na ole n'obosara. Oghere ndị a na-emighị emi nwere ala nke gbara ya gburugburu, ọ bụ ezie na mgbe ha pụtara nrịgo dị larịị, ọ na-ewere ọdịdị dị larịị, dị ka a ga - asị na ọ bụ ọkpọkọ nke ngwa. Ọ bụrụ na lapiaz amalite nke ọma ọ na - eme ịda mba n’ala. Obi ịda mba a na - ewepụta ọtụtụ enyemaka:
Ndokwa Ọ bụ nkụda mmụọ mechiri emechi nke nwere okirikiri ma ọ bụ okirikiri elliptical. Ọ nwere ike ịlele site na mita ole na ole ruo ọtụtụ narị. Isi ala nke ihe enyemaka a kpuchie ma ọ bụ site na adịghị ọcha ndị na-agbakọta site na nkume limestone. Dị ka mmiri na-agbakọta na ala, ọnụ ọgụgụ mgbasa nke nkume ahụ dị elu ma, ya mere, nsị na-egosi na-eduga n'ọgba. Ala a na-abụkarị ihe owuwu na-eme n'ihi ụzọ nke nkume limestone si agbaze obere obere oge. Ọ bụrụ na nguzo a ga-adị nso n’akụkụ ụsọ mmiri ahụ, ọ ga-ekwe omume na oke osimiri abatala n’ala ala a kpụrụ. Site na nsụgharị nnu, ọ nwere ike imebiwanye nkume ahụ.
Uvala. Typedị usoro a na-aputa ihe mgbe otutu mmiri na-etolite ọnụ rue mgbe ha sonyere n'otu ịda mba. A na-akpọ ya n'ihi na coalescence nwere ọdịdị alveolar.
Poljé. Ọ bụ ụdị nhazi ọzọ nwere njikọ gbasara enyemaka karst. Ọ na - eme mgbe a na - emechi oke ịda mba nke nwere ala ala na kilomita kilomita site na mkpọda ugwu. I nwere ike ikwu na ọ bụ nnukwu mkpụrụ vaịn. N’ime poljé enwere ụdị obere karst dị ka uvalas, lapiaces na sinkholes. Ebe ọ bụ na nkụda mmụọ ndị a buru ibu, netwọk ikuku na-amalitekarị na ha. Ebe ọ bụ nkụda mmụọ mechiri emechi, mmiri enweghị ike ịfefe n'ụzọ kwesịrị ekwesị kama ọ nwere ebe ịsa mmiri nke na-enye ohere ịnweta osimiri dị n'okpuru ala. Mpaghara dị nso na nsị a na-abụkarị ebe apịtị ebe ọ bụ na ha na-emekarị mgbe mmiri na-ezo. Ihe niile ga-adabere na nha nke sink na ole mmiri ozuzo.
Esịtidem karst enyemaka
Ọ bụ ụdị enyemaka ọzọ nke karst nke na-etolite ọgba. Mmalite nke ụdị ihe enyemaka a na-eme na osimiri ndị dị n'okpuru ala nke na-agagharị n'ime okwute limestone. Mmiri a na-esite na mkpọmkpọ mmiri ndị anyị kpọtụrụ aha n’elu. Osimiri ahụ na-eji adịghị ike nke nkume ahụ ụzọ gafere ma banye n'ime ya. Ọ bụrụ na nkume ahụ gafee mmiri, ọ na-enye ya ụzọ dị iche iche dị n'okpuru ụzọ, anyị ga-ahụ ezigbo osimiri ndị dị n'okpuru.
Dị ka mmiri nke osimiri ahụ na-agbaze nzu nzu dị n'ime, ọ na-ahapụ ụzọ ochie iji gaa n'ihu na-aga n'ime ime. Nke a bụ ihe kpatara anyị ji nwee ike ịhụ ọgba ndị akọrọ kpamkpam nke osimiri gbahapụrụ. Dị elementrị kachasị nke anyị na-ahụ n'ọdọ mmiri n'ime ọgba bụ ihe a na-akpọ gallery. Gallọ veranda ndị a dị mkpa iji nọrọ nwere ike ịgba ọsọ ma gaa n'ihu n'okporo ụzọ ndị ọzọ. Gallọ veranda ahụ nwere ike ịdị mgbagwoju anya ma dị warara ma ọ bụ karịa karịa dabere na usoro mmiri ahụ. E nwere ebe a na-amanye mmiri ịrị elu ma banye n'ime usoro ọmụmụ dị iche iche. A maara ebe mmiri na-etolite ọzọ siphons.
Thelọ elu ndị a na-agbahapụ site na mmiri mmiri nke na-amalite ụzọ ọzọ na-ejigide oke iru mmiri na mgbidi na-ekesa mmiri ndị nwere calcium carbonate. Mmiri mmiri a bụ ihe, ọtụtụ afọ, ga-etolite stalactites na stalagmites. Ọ bụrụ na stalactite esonye ugbu a stalagmite ha ga-etolite kọlụm zuru oke. Maka nke a iji mepụta, ọtụtụ puku na ọtụtụ puku afọ gafere. N'ihi ya, ọgba ndị nwere usoro ndị a dị oke mkpa.
N'ime ihe ngosi nke veranda ndị a ọ nwere ike ime na ihe niile na-emecha daa ma na-apụ n'anya. Nke a bụ ka e si akpụ sickle na egbe ala. Ndị a bụ olulu miri emi nke gbara gburugburu mgbidi gbara ya gburugburu yana osimiri n’okirikiri. A na-akpọ mpaghara nke osimiri na-ahapụ ime ahụ gaa na mpụga.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere enyemaka karst.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara enyemaka karst
Gịnị bụ akwa